Cudurka meningitis-ka ah - kahortagga
Beauty iyo caafimaad Caafimaadka dumarka
Qoorgooyaha waa mid ka mid ah cudurrada ugu halista badan ee keeni kara dhimasho. Dhakhaatiirtu waxay kala duwanyihiin noocyo badan oo meningitis ah, iyadoo ku xiran qaybaha maskaxda ay saameysay, iyo sidoo kale cidda keentay wakiilkiisa - virus ama bakteeriya:
Marka xigta, waxaanu tixgelin doonaa calaamadaha xanuunka meningitis-ka, iyo sidoo kale tallaabooyinka looga hortagayo.
Waa maxay qoorgooyaha dareenka leh?
Cagaarshowga xuubka waxaa ku dhaco sababtoo ah guul darrada hoose ee maskaxda ee ay gashadaan enterovirus - Coxsackie iyo Echo. Fayraskan waa mid degan deegaanka, waxaana loo gudbiyaa qof iyada oo loo marayo:
cunto - khudaarta iyo miraha, hilibka, iwm.
dhibcaha hawada ka baxa (marka la eego xaalad xoog leh oo hawada ku jirta).
Cilmi-baadhayaashu waxay aaminsan yihiin in fayraskan ay u badan tahay inuu soo qaado marka la dabaasho - barkadaha, barkadda, iyo fursadda ugu weyn ee lagu qaadsiin karo dadka qaba difaaca daciifka ah.
Kooxaha khatarta ugu weyni waa carruurta da'doodu u dhaxayso 3 illaa 6 sano jir, sababtoo ah difaacidooda oo keliya ayaa la sameeyaa - hooyada horeyba way joogsatay inay shaqeyso muddadaas. Sababtaas oo kale - saameynta difaaca hooyada, carruurta ka yar lix bilood ee qoorgooyaha ayaa xanuunsanaya marar dhif ah.
Sidoo kale, dhakhaatiirtu waxay aaminsan yihiin in xagaaga cudurka infekshanku uu ku dhaco cudurka meningitis-ka.
Sidaa darteed, ka-hortagga iyo daaweynta cudurka meningitis-ka ee xiniifka ah ayaa lala xiriirinayaa saxitaanka difaaca, laakiin daaweynta waxaa ku jira daawooyin dheeraad ah.
Calaamadaha xanuunka meningitis-ka
Qoor-gooyuhu wuxuu bilaabmaa si deg-deg ah - bukaanka ayaa kor u qaadaya heerkulka ilaa 40 darajo. Waxa uu qabaa madax-xanuun , murqo-xanuun , iyo suuragal ah inuu jiro saxaraha saxarada.
Xaaladaha aadka u daran, bukaanku wuxuu dareemaa qalalaaso - tani waxay sabab u tahay dhaawaca maskaxda, iyo sidoo kale xaalad maskaxeed oo aan joogto ahayn: xaalad been ah iyo walaac.
Toddobaad kaddib, heerkulku wuxuu u dhacaa caadi, jidhku wuxuu soo celiyaa shaqadiisa, laakiin inta lagu jiro muddadan, dib u soo noqoshada cudurka waa suurtagal.
Haddii qofku uu ku xanuunsan yahay meningitis-ka, ka dib marka dib loo soo kabsado waa in lagu daaweeyaa dhakhtarka neerfaha, ka dib markii uu jirradan ka dib jirro dhacdooyin sii-hara oo muddo dheer ah ee qaabka asthenic, madax-xanuun, iwm.
Cabbiraadyada looga hortago meningitis-ka xannuunka
Badanaa, cudurku waa u sahlan yahay in laga hortago daaweynta, sidaa daraadeed fiiro gaar ah waa in la bixiyaa si looga hortago cudurka meningitis-ka ee faafa.
Tallaabooyinkan waxaa loo qaybin karaa laba qeybood: ciriiri iyo daawooyin.
Hababka nidaamsan ee looga hortago qoorgooyaha:
Tan iyo markii la furay kaydka furan badiyaa waxay noqdaan ilo infekshan, ka dibna dabaasha waa in ay ahaato meesha loo ogol yahay adeegga caafi-dhowrka iyo cudurrada faafa.
Cabitaanka la kariyey, biyaha la nadiifiyey ayaa sidoo kale yaraynaya suurtagalnimada caabuqa fayruuska.
U hoggaansamida shuruucda nadaafadda shakhsiga ah iyo wakhtiyada gacmaha lagu dhaqo waqtigooda ayaa kaa caawinaya inaadan iskaga ilaalin infekshinka meningitis-ka, laakiin sidoo kale fayrasyo ​​kale.
Sidoo kale, fayruska meningitis wuxuu ku jiri karaa khudaarta cagaaran iyo miraha, sidaas darteed waa in lagu daadiyaa biyo karkarin ka hor inta aan la isticmaalin; qaanuunkan gaar ahaan wuxuu khuseeyaa dadka horay ugu dhacay cudurka menanjiito.
Joojinta jidhka waxay caawineysaa in ay kordhiso shaqadeeda ilaalinta ka hortagga fayraska iyo bakteeriyada.
U hoggaansanaanta nidaamka tallaalka - ka hortagga jadeecada, qaamo-qashiirta, rubella waxay gacan ka geysataa in la yareeyo suurtagalnimada dhibaatooyinka haddii ay dhacdo infekshanka cudurka menanjiito.
Diyaargarowga loogu talagalay ka-hortagga meningitis-ka xannuunka
Ka hortagga xanuunka meningitis-ka ee enterovirus wuxuu kaloo qaataa daawooyinka xoojiya difaaca jirka:
fitamiino: ascorbic acid (vitamin C), iyo sidoo kale fiitamiin B2, B6;
daawooyinka fayruska: arbidol, tamiflu, remantadine, amixin, interferon, iwm.
Dhakhaatiirta qaarkood waxay aaminsanyihiin in daawooyinka fayruska aaney lahayn saameyn la mid ah sida lagu sheegay tilmaamaha, laakiin qaarkood waxay aaminsan yihiin in daawooyinkani ay kor u qaadi karaan iska caabinta jirka, gaar ahaan saldhigga interferon, borotiinka ilaalinta ee dhiiga bini-aadamka.
Sidee loo daaweeyaa arthrosis ee wadajirka jilibka?
Cudurka macaanka ee macaanka ayaa keena
Ma waxaa halis ah in laga saaro jiirarka?
Wilkinson ee Aasaasiga
Bronchitis oo aan qufaco
Bursitis ee suxuunta suxulka - calaamadaha iyo daaweynta
Miraha cadarka laga bilaabo ari
Cabbiraadda hunguriga - calaamadaha iyo daaweynta
Noocyada neutrophils ayaa hoos loo dhigaa
Kombiyuutarrada miyir-qabka waa daawooyinka ugu wanaagsan ee runtii ku caawiya
Coccyx waa xanuun - dhammaan sababaha iyo qaababka daaweynta
Ilmuhu si xun ayuu u seexdaa
Hilibka digaag - cuntooyinka ugu delicious ee cajiinka for filets iyo baalasheeda
Sannadaha cusub ee hadiyadaha gabdhaha
Goobta waraaqda musqusha
Ilmaha ayaa qufacaya
Saqafka la joojiyay
Qalabka biraha ee jikada
Sidee loo kariyaa digirta loogu talagalay qurxinta?
Damaashaadka Iskoolka Vernal Equinox
Sidee loo noqdaa haweeney farxad leh 40 sano?
Waa maxay ubaxyada la siiyaa arooska?
Xargaha loogu talagalay yoga
Gwen Stefani iyo Gavin Rossdale ayaa la kulmay furitaan dheer
Miraha oo miisaanka lumay
Borshevik - gubasho
Walaaca dhaldhalaalka - 68 sawirada ugu quruxda badan oo qurux badan leh dhaldhalaalka dhadhan kasta
Indhaha demodektiga - calaamadaha iyo daaweynta
Qadka jacaylka gacanta